Wararka - Xusuusnow dhinacyadaas marka aad iibsaneyso isku xirayaasha awoodda
Xusuusnow dhinacyadaas marka aad iibsaneyso isku xirayaasha korontada
Xiriiriyaha awoodda wax iibsiga ma noqon karo qof dhammaystira, waxaa jira xiriirro badan, xirfadlayaal badan si ay uga qaybgalaan, qof si dhab ah u fahma awoodda tayada isku xiraha, isku xiraha istaagga ama dhicidda qayb kasta ayaa sameyn karta , dadka qaar ayaa haya qiimaha isku xiraha, marka laga gorgortamayo qiimayaasha si fiican bay u garan karaan, dadka qaar waxay rabaan inay ogaadaan faahfaahinta qandaraaska ee khuseeya, iyo xallinta dhibaatooyinka, sidaa darteed, waqtiga la iibsanayo isku -xirayaasha waaweyn ee hadda jira, baahida ma aha qof laakiin koox weyn, kooxdu waxay u baahan tahay dhammaan dhinacyada ururinta kartida, kaliya sidan, Si aad u doorato astaan ​​isku xira aad u wanaagsan.
Ma rabtaa inaad noqoto iibsade isku xiraha wanaagsan ma aha mid aad u fudud, gaar ahaan isku xiraha maanta suuqa ku qasan, haddii aad rabto inaad ku xirato noocyo badan oo isku xira si aad u doorato badeecooyin raqiis ah oo wanaagsan, waa inay horumariyaan muhiim, haddii kale, waxay u badan tahay inaad wakhti ku qaadato, laakiin weli ma haysato ikhtiyaar aad ku soo saarto badeecad wanaagsan.
Waxaa jira tirakoob faahfaahsan inta badan alaab -qeybiyeyaasha isku xira suuqa. Sida odhaahdu u socoto, marka la barbardhigo oo keliya ayaan ka fogaan karnaa khasaaraha. Isbarbardhig faahfaahsan oo keliya ayaan ku soo ururin karnaa alaab aad u fiican. Maalmahan, waxaa suuqa gudaha ka jira alaab -qeybiyeyaal badan oo isku xira, badeecaduna waa kala duwan tahay. Dabcan, marka aad wax iibsaneyso, ha ahaato tayada marka hore ama waxqabadka qiimaha ayaa ugu horreysa. Haddii aadan eegin liiska qiimaha marka loo eego tayada, doorasho aad u wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, xaddidnaanta kharashka awgeed, shirkado badan ayaa doorta badeecado leh waxqabad aad u sarreeya, taas oo u baahan dadaal badan si loo barbardhigo badeecadaha iyo qiimaha kala duwan. Dhammaan dhinacyada isuduwidda alaab -qeybiyeyaasha waxay u baahan yihiin hannaan, marka waa inaannaan noqon kuwo deg -deg ah, deggena inta lagu guda jiro wareysiga, oo aan helno dhibic ku habboon labada dhinacba aqbali karaan.
Qeybta kale waa in la kormeero tayada. Sababtoo ah isku-xiraha ayaa ah soo-saare nooc-kala-soocid ah, tayada waa in si dhow loo raaco, soo-saaruhuna waa inuusan samayn alaab qallafsan ama geesaha geedi socodka oo dhan wuxuu u baahan yahay shaqaale xirfad leh si uu u hubiyo una aqbalo si looga hortago tiro badan oo alaabo cilladaysan. Sidaa darteed, geedi socodka wax soo iibsiga oo dhan ee isku xira korontadu ma aha wax aad u fudud. Intaa waxaa dheer, muhiimada xiriiriyaha ayaa u baahan shaqaale takhasus u leh shirkadda inay mas'uul ka yihiin soo iibsiga.
NBC Electronic Technological Co., Ltd. (NBC), oo la aasaasay 2006, hadafkayagu waa: hal-abuurka qaybta wax-soo-saarka, xakamee tayada heerka koowaad. Waxaan leenahay boos ballaaran oo isku xirayaasha degdega ah, isku xirayaasha warshadaha, isku xirayaasha korantada, isku xirayaasha batteriga, isku xirayaasha lacag bixinta, isku xirayaasha korantada, isku xiraha sare ee hadda jira, badeecadaha korontada Anderson, isku xirayaasha APP, isku xirayaasha modul, isku xirayaasha batteriga iyo wixii la mid ah. Sannadkii 2019, waxaan aadnay dibadda oo aan u tartannay suuqa caalamiga ah.
Haddii aad hayso wax faallooyin ah iyo soo -jeedinno ah oo ku saabsan isku -xirayaasha moodeelkayaga, fadlan wac shaqaalaha adeegga.
Fadlan gal boggayaga https://www.houdpower.com si aad wax badan uga ogaato isku -xirayaasha modul.
Waqtiga dhejinta: Oct-17-2019